बाट "एक" बिन्दु "बी" दर्शाउन
अन्य कुराहरु, कच्चा माल र तैयार उत्पादन को परिवहन सम्बन्धित समस्या, कहिलेकाहीं एकदम साईट व्यवसायी को जीवनलाई जटिल। सुरुमा यो यो उद्देश्य यसको आफ्नै छिटो लागि प्रयोग गर्न सस्ता छ जस्तो देखिन्छ। भन्छन्, जो कोहीलाई पनि केहि र जो कोहीले केहि भुक्तानी गर्न बातचीत गर्न आवश्यक छैन छैन। तर यो समस्या अर्को पछि एक उत्पन्न गर्न सुरु रूपमा, यो मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
भण्डारण परिवहन लागि उपयुक्त ठाउँ आवश्यक छ। आफ्नो मर्मतका र मरम्मत को लागि - modernly बक्से सुसज्जित। स्पेयर पार्ट्स र उपभोग्य किन्न आवश्यकता बारे मा भूल छैन। साथै, चालक र मेकानिक्स staffed छ। यो गणना जसमा मासिक रकम पनि एउटा सानो आफ्नै छिटो सामग्रीहरू पोखाउनुहोस् हुनेछ सजिलो छ।
ठोस परिवहन संगठनको सेवाहरूको लागत यसलाई तुलना गर्नुहोस्। सामान्यतया, यी लागत धेरै कम छन्। एकै समयमा तपाईं समस्या, फ्लिट को सामान्य कार्यका लागि आफ्नो व्यवसाय को लागि विशिष्ट, तर आवश्यक छैन समाधान गर्न आवश्यकता उन्मुक्ति। त्यहाँ यस्तो ट्रकिंग मास्को सेन्ट पीटर्सबर्ग विशेष परिवहन कम्पनीहरु रूपमा entrusting पक्षमा धेरै बलियो तर्क हो।
पहिले, को पेशेवरों छिटो काम गर्छन्। कुनै पनि गम्भीर परिवहन कम्पनी प्रत्येक उडानको लागि सबै भन्दा राम्रो मार्ग हो जो आफ्नो रसद टीम, छ। को चक्कर "Stoppers", सडक को मरम्मत र बन्द-सडक खण्डहरू। एक सीधा लाइन - यो केवल कागज, सबभन्दा छोटो निर्देशन Mezhuyev प्रस्थान विन्दु र गन्तव्य छ। राष्ट्रिय सडक मा, नियम लागू हुँदैन।
दोश्रो, त्यहाँ सधैं कार, सबैभन्दा परिवहन कम्पनी को विशाल पार्क मा आफ्नो सामान को परिवहन लागि उपयुक्त हुनेछ। र तपाईं एकदम यसको यातायात मिसिन गर्न छाँटकाँट छैन मा उत्पादन नियुक्ति मा कठिन निर्णय खोज्न हुनेछैन। व्यवसायी इच्छित कार वर्ग आवंटित र सुरक्षित यसको कार्गो मा सुरक्षित हेरविचार गर्नेछन्।
तेस्रो, कच्चा माल वा समाप्त माल को परिवहन लागि सही क्षमता संग एक कार विनियोजन गरिनेछ। र तपाईं, हाम्रो आफ्नै छिटो संग मामला छ रूपमा कम tonnage मिसिन गर्न कार्गो को मात्रा पूरा गर्न प्रयास हुनेछैन। वा ठूलो मात्रा परिवहन underload एक ब्याच साथ राखे। अधिकतम मिल्ने चरित्र-कर्तव्य परिवहन वाहन सधैं कम गर्न जान्छ।
Horeca: यो अर्थ के हो?
संगठित र longshoremen को सेवाहरू बिना मास्को मा ड्राइभ Apartments कार्यान्वयन गर्न कसरी
"Abad समूह": कम्पनी समीक्षा
लेबल डिस्क मा - छवि लागू लागि विश्वव्यापी विधि
वजन र स्वास्थ्य सुधार को लागि जाभा फुल चिया
आफ्नै हातले थर्मोस्टेट टोयोटा परिवर्तन
नतालिया Antonova - जीवनी, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन
रोजगारीको विशेषता गर्न को हानि गर्न थिएन
एलसीडी टिभी हाईयर LE32K5000T: समीक्षा, विनिर्देशों र सुविधाहरू
हामी हाम्रो आफ्नै हातमा एकैचोटिको यात्रा गर्छौं!
सबैभन्दा लामो खुट्टा - सबै भन्दा साधारण